लकडाउन अघि र पछिकाे बौद्धनाथ- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
लकडाउन अघि र पछिकाे बौद्धनाथ
वैशाख १०, २०७७ दिपेन्द्र रोक्का
काठमाडौँ — नेपालको सबैभन्दा ठूला गोलाकार भएको बौद्धनाथ स्तूपको दृश्य यतिबेला फरक देखिन्छ। कुनैबेला आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको घुइँचो हुने यस क्षेत्र लकडाउनले सुनसान अनि शान्त छ।
लामोसमयसम्मको लकडाउनले पशुपक्षीलाई समेत असर पारेको छ । नजिकिँदै गरेको बुद्ध जयन्तीलाई समेत लकडाउनले असर पार्ने देखिएको छ । स्तुपा वरिपरिका दृश्य फरक छन् प्रवेश द्वारमा सुरक्षा दिइरहेका सुरक्षाकर्मी छन् । बिहान, दिउँसो र बेलुका भक्तालु तथा पर्यटकको लस्कर लाग्ने स्तुपा सुनसान छ ।लकडाउन अघि र पछि भिडियोमा हेरौं विश्व सम्पदामा सूचीकृत बौद्धनाथ स्तुपा ।
प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ १३:०८
लकडाउन अनुभूति- मेरो देश र पराई देश
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो हरेक दिन सञ्चारमाध्यमबाट नागरिकलाई सम्बोधन गर्न आउँछन् । कोरोनाको असरबाट कति संक्रमित भए, कतिको मृत्यु भयो भन्ने कुरा जानकारी दिएपछि सरकारले यस घडीमा दिनदिनै बदल्न परेका रणनीतिका बारेका स्पष्ट कुरा राख्छन् ।
वैशाख १०, २०७७ प्रभादेवी कैनी
काठमाडौँ — इतिहास भन्छ आजको मानव समाज अनेकन महामारी र प्राकृतिक विपद् झेलेर नै यहाँ आईपुगेको हो । तापनि हामीलाई लाग्दैछ पृथ्वी लोकका आममानव आतंकित बनेको आजको जस्तो क्षण सायद कसैले कहिल्यै भोग्यो होला ।
हिँडडुल गर्न डर, अरुसँग छुन र बोल्न डर । कसैले खोके तर्सनु पर्ने । कसैले हाछ्ञ्युँ गरे पर सर्नु पर्ने । र आफुले आफैंलाई कोठाभित्र बन्दी बनाउनु बाध्य हामीलाई योभन्दा भयङ्कर त्रासदी के हुन सक्ला र भन्ने लाग्दैछ।
यस्तो पनि कुनै दिन आउला भनेर कसले सोचेको हुँदो हो र ? अनुमानमात्र लगाउन पनि कठिन छ, विश्वास गर्न गाह्रो छ र पनि यो एक कटु यथार्थ स्वीकार्न विवश छ समस्त मानव जगत।
चीनमा कोरोनाको प्रकोप फैलिएको खबर आउन थालिसकेको थियो । यो भाइरस केही समयको अन्तरालमा चीनमा नै सखाप पार्नेछन् भन्ने लागेको थियो मलाई । मेरो अल्पज्ञानको परिणाम भनौं– न यसको उत्पत्तिबारे चासो, न यसको तीव्र संक्रमणबारे खोजी । यस्ता पक्षलाई वेवास्ता गर्दै यसको आतंकबाट आफू उम्कने दाउले हङकङको बाटो छोडेर दोहा र लण्डनतिबाट भागेकी थिएँ म क्यानडा ।
आतंकले अहिलेजस्तो विश्व्यापी रुपमा भयंकर अवतार लेला र यसको फैलावट र आतंक दिन दुई गुणा रात चारगुणाका हिसाबले बढ्ला भन्ने कुरामा यति बिध्न शंका थिएन । बाटो फेरि फेरि कोभिड १९ लाई झुक्याउने मेरो दाउ फेल खाएको छ । मलाई लागेको थियो एशियाली देशहरूमा जस्तो रोगले यहाँ दुख दिँदैन । लोभलाग्दो समृध्दि र कुशल व्यवस्थापनले यहाँका मानिसहरू भाइरसको फैलावटलाई तुरुन्त रोक्न सफल होलान् भन्ने मेरो सोचाई थियो । सामान्यतः अरू बेला मिल्ने अनुमान यसपटक मिलेन । कोभिड १९ ले त झन उल्टो विकशित भनिने देशमा पो बढ्ता उपद्रव मचाउँदै छ ।
दुई महिनाको छोटो बसाई तय गरेर यहाँ आएकी म फर्कन नपाई यस देशको लकडाउनमा अल्झिएकिछु । बिल्डिङको पच्चीसौं तलामा स्थित यस अपार्टमेन्टको कोठाभित्र थुनिँदा समाचार सुन्नुमात्र विशेष काम भएको छ । पट्यार लागेको समयमा झ्यालबाट बाहिर हेर्छु । यहाँबाट देखिने पियर्सन एयरपोर्टबाट एकैसाथ टेकअफ र ल्याण्डिङ गर्दै गरेका अनेकौं प्लेन देखिन्थे आकाशमा पहिले । अहिले पाँचसात मिनटको अन्तरालमा एकदुइटा उडेको देख्न पनि मुस्किल छ । क्यानडाको सबभन्दा ठुलो हवाइ सेवा प्रदायक संस्था- एयर क्यानाडाले आफ्ना हज्जारौं फ्लाईट कटौती गरेकोछ । यसका ३० हजारमध्येका १६ हजार ५ सयलाई कामबाट मुक्त गराएकोछ । अन्य एयर लाइन्सको हालत झनै खराब छ भनिन्छ ।
कोरोनाको विश्वव्यापी संत्रासले सबैको मनमा अब रहुँला कि नरहूँला भन्ने हुटहुटी मच्चिएकोछ । यसैक्रममा संसारभर छरिएर बसेका मानिस आफ्नो देश पुग्न आतुर देखिन थाले । आफ्नो देशका नागरिकको चाहनाअनुरुप प्राय: सबै देशका सरकारले प्लेन चर्टर गरेर अन्यत्र रहेका आफ्ना नागरिकलाई ओसारेका ओसार्‍यै छन् । केही दिनअघि नेपालबाट अस्ट्रेलियनहरु फर्कंदै गरेका देखेकी थिएँ । अमेरिकाले नब्बेभन्दा बढ्ता देशहरुबाट आफ्ना नागरिक ल्याइसकेकोछ । क्यानडा सरकारले पनि धेरै देशबाट आफ्ना नागरिकलाई भित्र्याइसकेको छ नेपालबाट पनि आफ्ना नागरिक फर्काउने तयारीमा जुटेको समाचार सुनेकी थिएँ ।
समाचार हेर्दा र सुन्दा देशबाहिर रहेका नेपाली पनि आफ्नो देश फर्कन चाहनेको संख्या निकै रहेछ। तीमध्ये अधिकांशले सरकार गुहारेका छैनन् । चीनको वुहानमा रहेका विद्यार्थीलाई बाहेक सरकारले अरुलाई आफ्नो पहलमा देशमा भित्र्याउन कोशिष गरेको पनि छैन । कतिपय नेपाली आफ्नै सुरले आत्तुरी गरिगरि आफ्नो देश फर्केका छन् । उनीहरुलाई थाहा छ अमेरिका, क्यानडा, जापान, अष्ट्रेलिया र युरोपियन देशका सरकारझैं सबैलाई देशभित्र ल्याउनसक्ने ताकत नेपाल सरकारको छैन । यतिसम्म ठीकै मान्न सकिएला।, तर आफ्ना नागरिकालाई आफ्नै देशमा आउन आह्वान गर्ने काममात्र पनि सरकारले गरेन । उल्टो बाहिर रहेकाहरू नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशयले मौन बसीरह्यो ।
अरबतिर भएकाहरू नआउन् भन्ने ध्येयले त्यहाँकाको सरकारसँग उतै राखिमाग्न अनुरोध गर्‍यो। त्यतिमात्रै पनि होइन आफ्नै प्रयासले आएकालाई रोक्ने, लछार्ने, नाङ्गै पार्नेजस्ता के पो गरेन ? सरकारको यस्तो गैह्रजिम्मेवार हर्कतलाई छल्दै कोही महाकालीमा हामफालेर देशभित्र पसे, कोही वैधानिक नाका छलेर जंगल र खेतका आलि कटेर पसे । अहिले पनि सहरमा काम गर्न आएका मजदुर सहरमा खान र बस्न नसकी पोका बोकेर हप्तौंको बाटो खाली खुट्टा हिँड्दै गरेका अनेकन तस्बिर देखिन्छन् । यी सबै घटना परिघटना देख्दा लाग्छ लकडाउन घोषणा गरिदिएर, घरमै बसौं, कोरोनाबाट बचौं भनेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको सम्झँदैछ सरकार ।
दिनदिनैको समाचारमा देख्छु अनि आफ्नो देश र पराइ देशका जनताको आशा र सरकारको कामको लेखाजोखा गर्छु। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो हरेक दिन सञ्चारमाध्यमबाट नागरिकलाई सम्बोधन गर्न आउँछन् । कोरोनाको असरबाट कति संक्रमित भए, कतिको मृत्यु भयो भन्ने कुरा जानकारी दिएपछि सरकारले यस घडीमा दिनदिनै बदल्न परेका रणनीतिका बारेका स्पष्ट कुरा राख्छन् । अनि पत्रकारबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन्छन् र घरभित्र पस्छन् । त्यसैगरि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि हरेक दिन कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न बनाइएको टास्कफोर्ससहित टिभिमा उपस्थित भइ दिनदिनको बदलिँदो अवस्थाबारे अमेरिकी जनतालाई जानकारी गराउँछन् । संक्रमणबाट प्रभावितहरुको संख्या र दिनदिनै कोरोनाका कारण संक्रमित र मृतकहरुको आधिकारिक तथ्याङ्कसहित हरेक दिन सरकारकोतर्फबाट हुँदै गरेका प्रयासबारे आफ्ना नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कोसिश गर्छन् ।
लकडाउनको यस परिस्थितमा कमाई खाने साना व्यवसायी, अधिकांश हवाईसेवा, रेष्टुराँ व्यबसायीहरू, उद्योग र निर्माण कम्पनीहरू, सेवा प्रदायक निजी कम्पनीहरू या त पूर्णरूपमा बन्द नै भएका छन् अथवा कामदारहरूको अत्याधीक कटौती गरेका छन् । ग्रोसरी र खाद्यस्टोरमा सीमित मानिसले मात्र काम गर्दैछन् भने सरकारी सेवा र स्कुल कलेज मिलेसम्म अनलाईनबाट सञ्चालन गरिँदै छन् ।
यस्तो असाधारण अवस्थामा कोरोना रोकथाम सँगसँगै निम्न आयमा बाँच्न बाध्य आफ्ना देशबासीका लागि के सुविधा दिन सकिन्छ भनी हरदम प्रयत्नशील देखिन्छन् । सरकारको ध्यान नपुगेको क्षेत्र कुनै छैन । देशका नागरिक कसैले उपेक्षाको अनुभूति गरेको देखिँदैन । धमाधम सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।
यस महिनाको सुरुमै प्रधानमन्त्री ट्रुडोले भरखर कामबाट हटाइएकाहरूका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना २ हजार डलर दिने घोषणा गरे। अहिलेलाई यो रकम चार महिनालाई दिइएको छ । त्यसबेलासम्म परिस्थितिमा केही सुधार हुने आशा राखेर चार महिना तोकिएको हुन सक्छ । केही गरि सुधार हुन नसकेको खण्डमा फेरि केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेछ आफ्नो सरकारले भन्ने भरोसाका साथ आश्वस्त छन् जनता पनि । त्यसका साथै हरेक बालकका लागि दिँदै आएको मासिक खर्चमा एक वर्षका लागि ३ सय डलर थपिएको छ भने वृध्दहरुका लागि पनि विभिन्न किसिमका सहुलियतहरु थपिएका छन् । त्यसैगरि बिद्युत महशुल घटाइएकोछ, हरेक महिना तिर्नुपर्ने घरको मोर्टरेज, गाडी र अन्य किस्ताबन्दीमा किनिएका सामाग्रीको समय सीमा खुकुलो पारिएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जो कोरोना भाइरस संक्रमणको यस समयमा सायद संसारकै सबैभन्दा आलोचित व्यक्ति हुन्, जसका कारण अमेरिकाले अकल्पनीय दुख र क्षय व्यहोर्नु पर्‍यो भनेर उनलाई नसराप्नेहरू कमै होलान् । यसै समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अमेरिकाले दिँदै आएको रकम नदिने घोषणा गरेर विश्वमा नै आलोचित हुन पुगेका यी राष्ट्रपतिले समेत आफ्ना नागरिकका हितमा भने अनेकौं कार्यक्रम ल्याउनु परेको छ । यस विपत्तिमा कामबाट बिमुख हुन पुगेकाहरुका लागि २० खर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएका छन् ।
अहिले काम गुमाएर बेखर्ची बनेका ३ करोड सत्तरी लाखले यस राहत कोषबाट सहुलियत खोज्दैछन् । अमेरिकी जनता र यहाँ वैधानिक तवरबाट बस्दै आएका आप्रवासीहरु समेत सबैलाई सरदरमा सरकारले प्रत्येक परिवालाई २४ सय डलर र एक्लै बस्दै आएकाहरूलाई १२ सय डलर दिने निर्णय गरेको छ। सत्र वर्षमुनिका बालबालिकाकालाई मासिक थप ५ सय डलर दिइने रहेछ । यसबाट समृध्द देश र जिम्मेवार सरकार भएका ठाउँमा जस्तै दुखका दिनमा पनि साधारण जनता कसरी आश्वस्त हुने रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
यता पराई देश लकडाउनमा छ र उता मेरो आफ्नो देश पनि लकडाउनमा छ । दिनदिनैका समाचारबाट म आफ्नो देश र यी पराई देशको लकडाउनको स्थिति र बेथिति पनि नियाल्दै छु । मेरो देशमा सरकार लकडाउनको उर्दी गरेपछि आफ्नो दायित्व सकिएको सम्झन्छ । जनताले घर जान नपाउँदा बसको व्यवस्था गरेर घर पुर्‍याउनेसम्म जिम्मेवारीबाट सकेसम्म पन्छिन खोज्ने अनुत्तरदायी निकायलाई सरकार मानिरहन बाध्य हामी नेपालीका लागि योभन्दा विडम्वनाको विषय सायदै हुन सक्ला ! यहाँका जस्तै मेरो देशका निर्वाचित शासक पनि बेलाबेला देखिन्छन् सञ्चारमाध्यममा । तर, पत्रकार सम्मेलन गर्दैनन् । प्रश्नहरुको सामना गर्दैनन् । बरु राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्छन् । त्यसमा पनि कि त उखान र टुक्काले भुलाउन खोज्छन् कि त दुई तिहाईको आडमा जनतालाई धम्क्याएर चुप लगाउने प्रयास गर्छन् ।
निश्चयै पनि यस्तो समयमा संक्रमण रोक्नु र रोग फैलन नदिनु सरकारको प्रथम दायित्व हो । तर, त्यसोभन्दैमा अलपत्र परेका जनतालाई केही छाक खाना खुवाउने र कमसे कम आफ्ना घरसम्म पुर्‍याउने दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ ? एउटा काम गरेको देखाएर अर्को कामबाट पन्छिनु कपट हो । विकसित देशहरुले ल्याएजस्तै राहत र क्षतिपुर्तिका प्याकेज ल्याउन सकेन । ठीकै छ मानियो, देशमा बेरोजगारलाई दिन सक्ने श्रोत र साधनको कमी छ, त्यो पनि अहिले नै कसैले खोजेको पनि छैनन् । तर, सहरमा बस्ने खाने अवस्था नदेखेर हिँडेकालाई कुनै निश्चित व्यबस्थाबिना नै सहरमा नै बस्न भनिन्छ । औषधि किन्न निस्किएका मानिस कुटिन्छन् । बिशेष दक्षताका डाक्टरलाई हतास गराउने प्रयासका समाचार सुनिन्छन् ।
धन्य मेरो देश ! लकडाउन छ भने के सुत्केरी, हृदयघात हुन लागेका मानिस, दुर्घटनामा परेकाहरूलाई अस्पताल नलैजाने ? लकडाउनको स्थितिमा अत्यावश्यक कामका लागि मानिस बाहिर जान सक्छन् । यो कर्फ्यु आदेश होइन् भन्नेजस्ता सामान्य कुरा पनि प्रहरीलाई सरकारले अवगत गराउँदैन । प्रहरी पनि पाएको बेला निरिह जनातालाई बिनाकारण दुख दिन्छ ।
यतातिर खुल्ला र फराकिला बाटा छन् । लकडाउनकै बेला पनि एकदुई- एकदुई जना मानिसहरु मिलेर हिँडेका देखिन्छन् । एक बबलबाट अर्को बबलमा नपस्ने भनिन्छ । जस्तो एउटै घरमा बस्ने हामी दुई तीनजना बाहिर सँगै हिँड्दा हुन्छ । तर हाम्रो बबल (परिवारजस्तो सानो एकाई)ले अर्को बबललाई नतोड्नु भनिन्छ । एक बबल अर्कोसँग मिसिन भएन। मिसिएको खण्डमा हामीले अरुलाई संक्रमण गर्ने अथवा अरुबाट संक्रमित हुने डर रहन्छ । यसबेला बाहिर निस्कनै पर्नेले यत्ति कुरा बुझ्नु पर्‍यो कि बाहिर नहिँडि नहुने बेलामा पनि अरुसँग यथेष्ट दुरी (कम्तिमा पनि २३ मिटर )कायम गर्नुपर्‍यो ।
फेरि भनौं, लकडाउन यहाँ पनि छ तर रातदिन बस चलेकै छन् । यो बेग्लै कुरा हो, बस निकै पातलिएका छन् तर चलेका छन् । मानिसको आवागमन पातलो छ तर आत्यावश्यक कामका लागि एक ठाऊँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने जनतालाई यातायात सेवा दिइएकै छ, उच्च सतर्कताकासाथ । यतातिर देख्छु- अत्यावश्यक ठूला- साना खाद्यपसल पहिलेभन्दा राम्रो व्यबस्थाका साथ खुलेका छन् । अनलाईन सेवाबाट सामाग्री मगाउने र यसमा संलग्न कामदारहरू घरघरमा नै डेलिभरी गर्न व्यस्त छन् । खान नपाएर मरिन्छ कि भन्ने कतै कसैले अनुभुत गरेको देखिँदैन । कालो बजारी बढेको हल्ला कतै सुनिँदैन ।
सामान्य बेलामा गरिखान कामको प्राचुर्य त छँदैछ। आसामान्य अवस्थामा पनि मेरो देशका नागरिकले जस्तो सरकारप्रति विश्वास गुमाउन परेको छैन । सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले पनि आफू सुरक्षित महशुस गरेको छ ।आतंकित बनेको छैन बरू भरोसा जगाएको स्पष्टै देख्न र अनुभूत गर्न सकिन्छ । यस्तै आशा र विश्वासको वातावरण मेरो देशमा कहिले अनुभूत गर्ने होला?
प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ १३:०७
‘ओली कमरेडले मान्नुभएन भने हामीसँग विकल्प छन्’
साम्राज्ञी भन्छिन्, ‘म डराउँदिनँ, अरुलाई गुहार्दिनँ, आफैं प्रतिवाद गर्छु’
‘लक्षणसहितका संक्रमित बढ्नु खतराको संकेत’
ओली र दाहाललाई पार्टी फुटाउने अधिकार छैन : रायमाझी
अध्यक्षले पार्टी निर्णय मान्दिनँ भन्ने हो भने पार्टी चल्दैन : प्रवक्ता श्रेष्ठ